အဘယ်ကြောင့်သင်ကဥရောပသို့စျေးပေါတဲ့ရထားလက်မှတ်တွေဝယ်နိုင်ဖို့စဉ်းစားပါသငျ့ပါ? | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အဘယ်ကြောင့်သင်ကဥရောပသို့စျေးပေါတဲ့ရထားလက်မှတ်တွေဝယ်နိုင်ဖို့စဉ်းစားပါသငျ့ပါ?
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 11/09/2020)
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူဥရောပသို့မကြာမီအချိန်မရွေးသွားရန်စီစဉ်ထားပါသလော? အဖြေဟုတ်သည်မှန်လျှင်, ပြီးနောက်သင်၏အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေလိုပါလိမ့်မယ် စျေးပေါရထားလက်မှတ်တွေဥရောပ. ဒါကမှန်သည်. သငျသညျရထားလက်မှတ်တွေပေးသော်လည်းနိုင်ပါတယ်, ဈေးပေါပေါသည့်အခါစျေးနှုန်းထားတဲ့ တိုက်ကြီးအပေါ်ခရီးသွားလာ.
သင်သည်လက်ျာက်ဘ်ဆိုဒ်ကနေသင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင်သို့မဟုတ်ဖို့ဘယ်လိုသိရန်လိုအပ်သည့်အခါဤသူကားအ ခရီးစဉ်အော်ပရေတာ. သင်တစ်ခုတည်းက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုရှာဖွေနိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ် အားလုံးဥရောပကျော်ရထားများအတွက်လက်မှတ်များရောင်းချ. ထို့ကြောင့်, ဂရုတစိုက်အပေါ်ကိုဖတ်ရှု.
ဥရောပရထား booking များအတွက်အထွေထွေအကြံပေးချက်များ
နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်တစ်ဦးနှင့်အတူတစ်ဦးကို PC သို့မဟုတ် Laptop ကိုပိုင်ဆိုင်အဖြစ် အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု, သငျသညျသှားဖို့ကောင်းပါတယ်. သင်ကဘွတ်ကင်လုပ်ဖို့အရာရှိတဦးကကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ log ရန်လိုအပ်ပါတယ်. ဥပမာ, သငျသညျရထားလမ်းကွန်ရက်များရှိ, သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင်နိုင်စွမ်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးတော်မူသော.
သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးဖြစ်ပါတယ် မြို့များကို select လုပ်ပါ မှ, သင်သည်သင်၏ရထားလက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အရာ. ဘယ်မှာသင့်ရဲ့တည်သော နေ့မှစ. ထိုမြို့ကို Choose ရထားခရီး စတင်မည်. ဥပမာ, သငျသညျဖို့စီစဉ်နေလျှင် အာရှကနေခရီးသွားလာ နှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းသွားရောက်ကြည့်ရှု.
ထိုအခါသင်ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် ခရီးသွားသင့်ရဲ့စမှတ်အဖြစ်လန်ဒန်. သူတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ပေါ်လာသကဲ့သို့သင်တို့မြို့များကိုရွေးနိုင်သည်.
သင်စျေးပေါသုံးပြီးသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အရပ်ထဲကတချို့ဟာ ရထားလက်မှတ်တွေ ဥရောပ Alicante ပါဝင်သည်, အမ်စတာဒမ်, ဘာစီလိုနာ, Bern, ဘူခါရက်, ကိုပင်ဟေဂင်, Dusseldorf, ဟမ်းဘတ်, အော်စလို, ပရာ့ဂ်, Salzburg, နှင့်အခြားသူများ.
ရထား Palermo မှ Messina
ရထား Palermo ဖို့ဆိုင်းရာကူစ်း
ရထား Palermo မှစစ္စလီကျွန်း
ရထား Palermo မှ Catania
ဒါကြောင့်သင်အသုံးပြုရသော website ကိုအရေးပါအဘယ်ကြောင့်?
သငျသညျဥရောပတိုက်တွင်နိုင်ငံတိုင်းကိုယ်ပိုင်ရှိကြောင်းသိရန်ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည် ရထားလမ်းကွန်ယက်ကို နှင့်ဘွတ်ကင်လက်မှတ်များ၏ system ကို. သင်တို့သည်ဤအရှာတှေ့နိုငျ ရထားလမ်းအော်ပရေတာ အတွက်စျေးပေါရထားလက်မှတ်တွေရောင်းချ ဥရောပ off-ရာသီအတွင်း.
ထို့ကြောင့်, သင်စဉ်အတွင်းသွားရောက်လည်ပတ်ရန်အကြံပြု Off-ရာသီ ထိုင်ခုံမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်နှင့်တက္ကစီအော်ပရေတာမွို့၌သင်တို့ပတ်လည်တာကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေးနှုန်းများနှင့်အတူပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည်အဖြစ်.
မီလန် Levanto မှရထား
မီလန်, La Spezia မှရထား
Siena, La Spezia မှရထား
Levanto ရထားမှ Siena
ဥရောပတိုက်တွင်စျေးပေါရထားလက်မှတ်တွေ purchasing မတိုင်မီသိရန်အမှုအရာ
သင် ... ရမည် ဝက်ဘ်ဆိုက်ကြောင်းသေချာစေရန်, သင်ရာမှ သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေ booking, စစ်မှန်ဖြစ်ပါတယ်. အများအပြားလိမ်လည်သူများကိုအွန်လိုင်းရှိပါတယ်, အသစ်သောခရီးသွားများအတွက်ကိုက်စားရှာဖွေနေ. သငျသညျစျေးပေါရထားလက်မှတ်တွေရတဲ့လိမ့်မည်ကတည်းက, မင်းတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး.
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှခရီးသွားများအတွက်တန်ချိန်ဝယ်ယူမှုလုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ဥရောပခရီးမှကြွလာအထူးသဖြင့်လာသောအခါ. ထို့ကြောင့်, သင်အထုပ်ကိုအတည်ပြုရန်အလွန်အရေးကြီးသည်က, အဆိုပါယာဉ်စီးခ, နှင့်စျေးပေါ booking ရှေ့တော်၌ထိုခရီးသွားအစီအစဉ် ရထားလက်မှတ်တွေဥရောပ.
ကဲ့သို့, ကျွန်တော်အထက်တွင်ဖတ်ပါ, ဥရောပတစ်ဝှမ်းရွှေ့ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု စီးပွားရေးအရရထားတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာမသာအမြန်ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်တိုက်ကြီးအားလုံးအကြောင်းပါသောအရာကိုအားဖြင့်သင်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေး. သင့်အနေဖြင့်၏တက်ကြွသဘောသဘာဝအမှန်တကယ်ခံစားရ ရှုခင်းနှင့်သဘာဝ settings ကို.
Lecce Salerno ဖို့လေ့
Foggia Salerno မှရထား
Salerno ရထားမှ Pisa
သတိရ, ရှိသည် သင့်မိသားစုနှင့်အတူပျော်စရာ, ဥရောပသွားရောက်လည်ပတ်တဲ့အခါမှာ – နှင့်စစျဆေး တစ်ဦးကရထား Save.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့် link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwhy-you-should-consider-purchasing-cheap-train-tickets-to-europe%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#မင်္ဂလာပါ ချစ်တယ် နင် europetrains လက်မှတ်တွေ
အကောင်းဆုံး Is ဘယ် - လေယာဉ်ခရီးသွားပီသသူရဲ့ကွာခြားချက်ရထားခရီးသွား?